एक्कासी प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोलाए सर्वदलीय बैठक ? Nepalpatra एक्कासी प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोलाए सर्वदलीय बैठक ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भोलि शनिवार विहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्‍य गर्नुअघि समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमाथि छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । भोलि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको समस्याको बारेमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ ।
बैठकमा निम्ता दिनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन समेत गरेको बताइएको छ । बैठकमा संसद अधिवेशन, कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
संसदमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टी गरी ७ दलको प्रतिनिधित्व छ ।